Zvakanakira nekuipira kuti usarudze yakaderera Utilisation zvazvingava nepachinko yokumusoro
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira kuti usarudze yakaderera Utilisation zvazvingava nepachinko yokumusoro
Nhambo Ini akazarura musuo nepachinko yaiitirwa, azere chiro tafura, imi makanga rira wenyika, uye izvi shop'll kuchengeta chemabhazi, ndinofunga kuti pane vazhinji havanzwi raparadza. Inotarisira mugwagwa, nokuti ndiyo shanduro yausina, haugoni kuramba mukana kuti pane chinhu drawback zvikamu zvakadai rokutengesa uye vatengi uye basa kana nzvimbo mamiriro ,. Achitaura
zvazvakashatira yakadaro nepachinko yokumusoro, zvakare pane akasununguka tafura, iyo tafura ndinofunga kuti pane chiri chokwadi kuti zvakaoma kunzwisisa sei zvakanaka papuratifomu iri. Kana indeterminate nechinangwa, kurasika chichaitika, richava nyore kukunda. Kunyange kana kuunganidza mashoko, nokuti vanoitisana uyewo sparse, mashoko simba uyewo zvakaoma akauya.
vanovimba POP uye mapepa, nezvimwewo, kunyange kana Semeyo muenzaniso aisa simba, nokuti shama kumira zvikuru, uye vakawanda chawo rikasauya, nyama yemhuka raparadza kana shaiwa, hauchafambi kukupa kumanikidzwa ichava.
ipapo, inoti chinonyanya chinetso yakaderera kugadzirwa chitoro.
Zvisinei, zvinobatsira kuti akadaro nepachinko yokumusoro aripo. Chikamu kuti chinhu tafura izere, iwe Maeru kuwedzera mukana kuhwina kushandisa chokwadi. Mune nepachinko yokumusoro yakaderera kugadzira, vakamhanya zvikuru kuti haana kumira yakakura, pane nguva neapo asingatarisirwi kufamba. Kwete kurasikirwa yakakwirira nokugaramo chitoro, uyewo kana pane kuti abudise chinhu putika payout.
tafura riri Hodai uchida kusarudza, zvakadai chete zvishoma kutamba, vatengi anoziva zvikuru nepachinko iri, saka simba iri wakakoka kuuya kuitika, kana yakanaka tarisa, kazhinji vatengi vaizorega pasina kutendeukira rakawandisa, muve. Uyewo, kana ukaedza kuhwina nechokwadi yakadaro chitoro, zuva-nezuva Data muunganidzwa mamwe matunhu nokugaramo chitoro achava zvinokosha.
kunyange Kunyange zvakadaro, nokuti ndiye nepachinko yokumusoro kwete zvakanaka oparesheni, nekuti zvakaoma kuverenga mafungu nechisimba kufamba pa. Nokuti shanduro haasi kumhanya, pane mukana kuti kunyange divi chitoro kwete zvakazara inounganidzwa nokuda vakanaka mashoko.
yakakwirira nokushanda Nepachinko chitoro, pane zvakasiyana-siyana yakaisvonaka Data kurutivi chitoro, asi kudivi chitoro vachatitaka Zvechokwadi zvinobatsira, ari nepachinko yokumusoro yakaderera kushanda, nokuti ndiyo shanduro haasi kumhanya, zvinobvira tenga mamwe mashoko muunganidzwa zvazova zvinhu zvakaoma. The
zvimiso, ndiko kuti muchitoro uyewo Customers uyewo handishanduki zvikuru. Shops, kana akaisa bhora chero nguva, edza kuchengeta imwe tsika vakaisa yakatarwa. Kunyange nepachinko yokumusoro yakaderera kuvhiyiwa, zvinonzi zvinoreva kuti zvinogoneka kuwedzera mukana kuhwina. Zvisinei, mbambo yakanyikwa tightening, akagara nekuti panewo zvakawanda kuti ndinoti zvose 1, achava kudiwa nokungwarira chiito.
kunzvengwa zvinoodza, pasi kumhanya chitoro asi, Uyai kusandura mafungiro, kuhwinha kubva muzana kumusoro uyewo zvingasava hope. Avo kunzi chete nepachinko yokumusoro yakaderera kumhanya pedo, zvingava kuti kunyange dzinonakidza wekuedza kukwikwidzana zvitoro.
Zvisinei, iri rinonyanya dzinoyamwa inonaka muto pachitoro kuderedzwa kushanda kuti kuva yepamusoro vanoshandisa. Pari, zvakawanda pakuenzanisa dhefisiti, inokurudzirwa kuvakazve zvavo wakatsiga ari muchitoro neumwe dhigirii oparesheni. Zvive naBhaasha. Pari, zvakawanda pakuenzanisa dhefisiti, inokurudzirwa kuvakazve zvavo wakatsiga ari muchitoro neumwe dhigirii oparesheni. Zvive naBhaasha. Pari, zvakawanda pakuenzanisa dhefisiti, inokurudzirwa kuvakazve zvavo wakatsiga ari muchitoro neumwe dhigirii oparesheni.